CIRA Inobudirira Agile Bhizinesi Njere Nzira nema MotioCI - Motio
CIRA Inobudirira Agile Bhizinesi Njere Nzira nema MotioCI
Jan 28, 2021Case Studies, MotioCI, Telecommunication Media Varaidzo
MotioCI Inobatsira CIRA Shanduko kune Agile BI Methodology
Bhizinesi reBusiness Intelligence (BI) kuCIRA rinoshandisa nzira isinganetsi yekuvandudza nekuendesa ruzivo kumitsara yavo yebhizinesi. Kutevedzera MotioCI yakatsigira kuchinjika kwavo kune imwe nzira yekukurumidza, ichivagonesa kumhanyisa kumhanyisa data rinotora nguva kune vashandisi vebhizinesi ravo. MotioCI yakawedzera kushanda kweyekuvandudza nzira yeBI uye ikadzora huwandu hwenguva inodiwa kugadzirisa matambudziko.
Iwo Matambudziko - Maitiro haana kutsigira Agile BI
CIRA yaita shanduko yekugadzirisa mashandiro uye kugadzirisa budiriro nenzira yekukurumidza. Vasati vasimudzira kuCognos 10.2, vakashandisa imwechete yeCognos nharaunda kugadzira, kuyedza, uye kumhanyisa mishumo yekugadzira. Maitiro avo ekutumirwa kweCognos aive nechokufambisa zvemukati pakati pemadhairekitori. Ivo vakashandisa nzira yekuendesa kunze kwenyika muCognos kugadzira mabhakiti ekutengesa kwavo kunze kana vachida kudzoreredza zvemukati. Mukuyedza kuwedzera iyo vechikwata cheBI velocity, apo CIRA yakaunza Cognos 10.2, vakaunza nharaunda dzakaparadzana kuita kusimudzira, kuyedza, uye kugadzira. Iyi nyowani yekuvakwa kweBI yaitoda chishandiso senge MotioCI kunyatsoita kuendesa kweBI zviwanikwa.
Pakutanga kuitira vhezheni yekudzora, ivo vaigadzira zvakapetwa zvinyorwa uye vovatumidza nemazita ekuwedzera, v1… v2… zvichingodaro. Shanduro yavo "yekupedzisira" yaizoendeswa kune "kugadzirwa" dhairekitori. Pakanga paine, zvisinei, zvikanganiso zvinoverengeka mune ino maitiro:
Shanduro zhinji dzemukati dzakawedzerwa kuCognos yemukati mechitoro, zvingangokanganisa mashandiro.
Iyi sisitimu haina kuteedzera munyori kana shanduko dzakaitwa kumishumo.
Izvo zvaive zvakaganhurirwa kumishumo uye kwete mapakeji kana mamodheru.
Mumwe chete weBI anovandudza aigona kushanda pane mushumo vhezheni panguva.
Maitiro aya akaita kuti zvive zvinorema kuona shanduro dzakasiyana kana kushandira pane zvakagadziriswa mushumo uye neshanduko.
Chikwata chekusimudzira cheBI paCIRA chakacherekedza kusashanda uku uye vakatungamira chirongwa chekukasira kuyedza kugadzirisa nyaya dzakatarwa. Chimwe chezvinangwa zvavo zvekutanga yaive yekuvandudza uye kusimudzira shanduko manejimendi maitiro. Nzira nyowani pamwe nesoftware munzvimbo yaidikanwa kuzadzisa ichi chinangwa. Dare rebudiriro rakateedzera zvisati zvatsanangurwa nzira dzekuchinja shanduko. Chikamu chakakosha cheaya maitiro chaive kupa vanhu simba nekwaniso yekuendesa pakati penzvimbo. Kubvumidza ava vanogadzira BI kuendesa zvemukati kubva kuDev kuenda kuQA kwakadzora zvakanyanya nguva dzekusimudzira. Vagadziri veBI havachafanirwa kumirira admin kuti vatore mushumo usati waedzwa muQA.
MotioCI kutumirwa uye neshanduro kudzora kwakavapa nzira yekuongorora kuti ndiani akaendesa, chii chakaendeswa, uye kupi uye kupi kwaakaendeswa. Kutorwa kweCIRA hupenyu kutenderera kunotanga ne:
Zvemukati zveBI zvinogadzirwa mune chero nharaunda.
Ipapo, inoendeswa kune iyo QA nharaunda, uko iyo imwechete kana vezera vanogadzira vanoiongorora.
Chekupedzisira, imwe nhengo yechikwata inoitakura ichigadzira.
ne MotioCI munzvimbo yekutsigira agile maitiro, vanogona ikozvino nekukurumidza kwazvo kugadzirisa mushumo, kuendesa kune imwe nharaunda mune mashoma mabhatani, kuiongorora, kuve nevashandisi vekupedzisira UAT (Yekugashira Yekubvumidza Bvunzo) iyo kana zvichidikanwa, uye wozoiburitsa kunze kune iko kugadzirwa nharaunda. Kana zvichidikanwa, ivo vanogona kungoita nyore nyore kubvisa kutumirwa.
“Mushure mekunge taendesa kugadzirwa, kana paine chimwe chinhu chakarasika mukuyedza, kana isu tine nyaya, tinogona kudzosera kumashure neshanduro yapfuura tichishandisa MotioCI chishandiso, ”akadaro Jon Coote, Ruzivo Management Team Lead yeCIRA.
Pamusoro pezvo, ivo vanofanirwa kupindura kune zvezuva nezuva zvikumbiro zvebasa nekukurumidza zvakanyanya, kunze kweyakajairika budiriro kutenderera. MotioCI yakavagonesa kuti vakurumidze kupindura izvi zvikumbiro zvebasa, nekuvabvumidza kuti vakurumidze kumhanyisa chero shanduko kuburikidza nekugadzira. Ivo vanokwanisa kuzviita zuva nezuva, kwete chero nguva pese panotenderera kutenderera.
Mumwe mukana wavakawana nawo MotioCI vhezheni yekudzora, yaive kugona kuenzanisa mushumo vhezheni munzvimbo dzese. Nekuti zviri nyore kwazvo kufambisa zvemukati zveBI munzvimbo dzakapoteredzwa, panogara paine njodzi yekuti chimwe chinhu chinoiswa mukugadzirwa kana ichifanirwa kuenda kuQA. Kugona kuenzanisa nharaunda dzakavapa vimbiso yekuti vari kuendesa zvirimo zvirimo.
Sekureva kwaMcKinsey & Kambani, "kubudirira kunoenderana nekugona kuisa mari mune zvakakosha digital kugona kunoenderana nehurongwa. ” CIRA yakawana iyo budiriro nekuishandisa MotioCI. MotioCI yakabatsira kuenzanisa yavo BI yekudyara nezano ravo. Mukudaro, ivo havana kuratidza chete kuchengetedza kuburikidza nekuvandudza mashandiro, asi zvakare vari nani kugona kushandira avo vekupedzisira vashandisi.
Chikwata cheBI cheCIRA chakatungamira kufambisa kuenda kunonamira BI maitiro uye vakawana MotioCI kutsigira kufamba uku. MotioCI yakakurumidza kuita chirongwa chekuvandudza nekupa simba vashandisi kukurumidza kuita shanduko, kuendesa, uye kuyedza BI zvemukati uchinge uine yekuwedzera kuchengetedzwa kwekugadzirisa uye kugadzirisa pazvinenge zvichidikanwa. MotioCI pamwe neagile methodology yakagonesa CIRA kukurumidza kuendesa data-rinonzwisisika dhata kune vashandisi vebhizinesi rayo.